Govinda's writings: साहित्यलाई सस्तो प्रचारबाट बचाउन सक्नुपर्छ
साहित्यलाई सस्तो प्रचारबाट बचाउन सक्नुपर्छ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. गोविन्द भट्टराई व्यक्ति एक प्रतिभा अनेक भएका साहित्यिक स्रष्टा हुन् । अंग्रेजी साहित्यका प्रखर व्याख्याता भट्टराईको नेपाली साहित्यमा पनि त्यतिकै ज्ञान छ । प्रजातान्त्रिक आस्थामा विश्वास राख्ने स्रष्टा भट्टराई वादविवादबाट मुक्त रहेर आफ्नो प्राज्ञिक स्वच्छ छवि बचाइराख्न सफल छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाली साहित्यको गरिमालाई उच्च बनाउन उनी सक्रिय छन् । मधुर स्वरका धनी भट्टराई ‘सादा जीवन उच्च विचार’ का सार्थक साधक तथा स्रष्टाका रूपमा परिचित छन् । स्वदेश तथा नेपाली डायास्पोपार (विदेश) मा आयोजना गरिने साहित्यिक कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्दा उनी पहिलो पंक्तिमा नाम लिइने स्रष्टाका रूपमा पर्छन् । पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनसागै साहित्यमा उनको विशेष अध्ययन छ । प्राज्ञिक स्रष्टा भट्टराईसाग नेपाली साहित्य र सिर्जनशीलताका विविध पक्षका बारेमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी सञ्जय पन्थीले गरेको कुराकानी :
Photo courtesy Binod Gaunle
तपाई, साहित्यकार, लेखक वा समालोचक के ?
साहित्यकार वा लेखक समानार्थी जस्तै कुरा हुन् । अझ स्रष्टा भन्ने शब्द छुटेको छ । यी छाता शब्द हुन् । एउटा साहित्यकार, लेखक वा स्रष्टा सिर्जनाका अनेक विधामा लागेको हुन सक्छ । त्यसकारणले गर्दा यी शब्दले स्रष्टाको रुचीको विधाको बारेमा कुनै परिचय दिादैनन् । तपाईंले साहित्यकार लेखकसाग समालोचक जोड्नुभयो । तर समालोचक त्यसमा अरूसाग नजोड्दा राम्रो हुन्छ किनभने समालोचकसाग जोडिने ता कवि, निबन्धकार, नाटककार, आख्यानकार जस्ता सह–शब्दहरू हुन्छन् ।
म के हुा भन्दा म सबैथोक हुा तर विशेषगरी मलाई साहित्य स्रष्टाको रूपमा चिनिन मन लाग्छ । मैले आख्यान र निबन्धमा केही योगदान गरेको छु । त्यसैले मलाई आख्यानकार वा निबन्कार भनिन मन लाग्छ । तर समालोचक भनेको सर्जक अथवा स्रष्टा जस्तो होइन ऊ एउटा सहसर्जक अर्थात उप द्रष्टा जस्तो मात्र हो । त्यसो त मैले केही समालोचना पनि लेखेको छु । साहित्यकार ‘स्रष्टा’ नहुन पनि सक्छ त्यसैले स्रष्टाको स्थान सर्वेपरि छ, त्यसपछि कुन विधाको, छुटयाउने कुरा आउाछ ।
नेपालमा पुस्तक प्रकाशन गर्ने संख्या बृद्धि हुदै गएपनि पाठकले रुचीका पुस्तकको अझै पनि अभाव छ, भन्छिन नी ?
यो प्रश्नको तथ्यगत उत्तर हुन सक्तैन । किनभने यस्ता प्रकारका टिप्पणी अथवा भावनाहरू मानिस पिच्छे बेग्लै हुने गर्दछन् । पाठकको निमित्त रुचीका पुस्तक भनेर केलाई बुझ्नु ? एउटा तहमा मुनामदन रुचाउनेको सङ्ख्या सर्वाधिक छ । पाठकको त्यही वर्गले सरल शैली र भाषामा लेखिएका कृति मन पराउाछ भने अर्केतर्फ उाभो चढ्दै जाादा मोहन कोइरालाका कविता, बैरागी कााइलाका कविता अथवा नगदीस शमशेर राणाका आख्यानहरू रुचाउनेको सङ्ख्या पनि रहेको छ । पुस्तकहरूको लेखन तथा प्रकाशन अनि पाठकहरूको सङ्ख्या र रुचीलाई एउटा पिरामिड अकारमा सम्झनु पर्दछ । अथवा एउटा स्तूप अनकर सम्झे पनि हुन्छ । स्तूपको फेदले ठूलो भू–भाग ढाक्तछ । त्यही स्तूपको टुप्पो सानो गजूर जस्तो हुन जान्छ । यसको तत्पर्य के हो भने पाठकका रुचीहरू उनीहरूका स्तर र ज्ञान अनुसार बेग्लाबेग्लै हुन्छन् । नेपाली वाङ्मयमा हरेक स्तरका लागि सुहाउने कृतिको सङ्ख्या पर्याप्त भइसकेको छ । उदाहरणका लागि कसैलाई आत्मजीवनीमा रुची रहेछ भने १०० वटा कृति कहिले पढेर सकिएला, उपन्यासमा रुची रहेछ भने १००० वटा कृति कहिले पढेर सकिएला ? रुचीअनुसारका कृतिले नेपाली प्रकाशन भरिएको छ ।
लेखन पेशा बनाउने भन्दा पनि रुचिले लेख्नेहरुको जमात बढ्दो छ, भन्निछ ?
यो धारणा ठीकै हो किनभने धेरैले साहित्य सिर्जनामा जाने रुची राख्दछन् । र लेखन प्रकाशन थाल्दछन् । परन्तु त्यसमा अडिनेहरूको सङ्ख्या कम्ति हुन्छ । यो स्वाभाविक छ किनभने सुरुमा लेखिएका सबै कृति सफल हुादैनन् । त्यसकारणले गर्दा शुरुमा यसलाई पेसा बनाउने अठोट गर्न गाह्रो हुन्छ ।
लेखक र पाठकमा पनि राजनितीक आस्था र बादका आधारमा सिर्जना र अध्ययन गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ , के साचो हो ?
यो कुरा निर्बिवाद छ । भिन्न रुचीर्हिलोक: भनिएको छ । वास्तवमा प्रत्येक व्यक्तिका दृष्टिकोण, विचार, मान्यता फरकफरक हुने भएकाले गर्दा नै अनेक प्रकारका धर्महरू स्थापित भएका छन् । अनेक प्रकारका आग्रह छन्, सिद्धान्त छन्, मान्यताहरू छन्, आस्थाहरू छन् । तिनै अनुसारका कृतिको अध्ययन र सिर्जनमा रुची हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक आस्था पनि त्यस्तै विभिन्नताको एउटा स्वरूप मात्र हो । हरेक विषय बहुल भएको जगत्मा राजनीतिक मान्यता पनि बहुल नै हुन्छन् । कम्तिमा दुई वटा छन् । एउटा छ यथास्थितिवाद अथवा सबैलाई मेट्न खोज्ने अधिनायकतावाद यसले अन्यवादहरूलाई निषेध गर्दछ भने अर्काे छ प्रजातन्त्रवाद अथवा बहुलतावाद यसले सबै प्रकारका विचार र वादलाई समेट्न खोज्छ । यी दुईका बीचमा अरू पनि छन् । कृति र पाठक सोही अनुसार होलान् ।
लेखन पेशा अपनाएर नेपालमा आत्म निर्भर हुनसक्ने अवस्था छ त ?
यो एउटा सपेक्षित कुरा हो । नेपालमा मात्र होइन विश्वसाहित्यलाई हेर्दा पनि बीस प्रतिशत मात्र स्रष्टा आत्मनिर्भर हुन सकेका छन् । असी प्रतिशतको निमित्त यो अभ्यासको इच्छाको अथवा आत्माको आग्रह हो । कसैलाई पनि सिर्जना गर्न सल्लाह यसले पेसा बनाउाला भन्ने हुादैन । कृषिमा अथवा व्यापारमा जस्तो लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल अवश्य हुने प्राप्त हुनेछ भन्ने प्रत्याभूति यसमा छैन । एक त अभ्यासमा धेरै वर्ष वित्छ दोस्रो स्रष्टाले निरन्तर साधना गर्न सक्तैन अथवा भ्याउादैन त्यसकारणले गर्दा पनि लेखन कार्यले सफलता प्राप्त गर्न सक्तैन । नेपालको सम्बन्धमा आत्मनिर्भर हुनेको प्रतिशत अझ न्यून छ । त्यसकारणले यो अन्तरात्माको आग्रहलाई, अभिव्यक्त हुन चाहने हृदयको उद्वेलनलाई, सरस्वतीको आराधनालाई अधिकांशले द्रव्यसित तुलना गर्दैन । अधिकांश त यो शान्त:सुखाय गरिने कर्म रहेको छ । यसमा आश्चर्य छैन । अटूट सधना गर्नेहरूले त्यसको प्रतिफल सम्मानमा, पुरस्कारमा र केही मात्रामा पाठकमा र द्रव्यमा प्राप्त गरिरहेको हुन्छ ।
जति नै सफल लेखक भनेर परिचित भएपनि प्रकाशक र बितरकले शोषण गरिरहेका हुन्छन् भन्ने गुनासो लेखकहरुबाट नैं सुनिन्छ ?
यस्तो प्रकारको दुराग्रह राख्नु ठीक छैन । अधिकांश लेखकको मनमा के हुन्छ भने आफ्नो पुस्तक प्रकाशित भएपछि त्यसको बिक्री अवश्य हुनेछ अथवा भइरहेको छ । सुने अनुसार पुस्तकको मूल्य जोड्दा थुप्रै आर्जन भएजस्तो लाग्छ । उसले हिसाब गर्छ र त्यो पैसा र प्रकाशकको गोजीमा गए जस्तो ठान्छ । तर यो भ्रम हो । साहित्यिक कृतिको बिक्री अत्यन्तै न्यून हुन्छ । केही सफल अर्थात लोकप्रिय कृतिले मात्र बिक्ने मौका पाउाछन् । प्रकाशक वा बितरकका घरमा कृतिको डङ्गुर हुन्छ । अनि ऊ पनि तिनीहरूको बिक्री बितरणको चिन्तामै हुन्छ । त्यसकारणले प्रकाशक वा बितरकको स्थिति लेखकले सोचे जस्तो कहिल्यै हुादैन । पाठय सामग्रीको कुरा अर्कै हो तर साहित्यिक कृति भने बिक्न धेरै समय लाग्छ । एउटा गरिब राष्ट्रमा भर्खर शिक्षाको स्तर उठ्न लागेको ठाउामा पठन संस्कृति शून्य भएको ठाउामा विचरा प्रकाशक र बितरकले चाहेर पनि शोषण गर्ने कुनै बाटो छैन । लेखकले त्यस्तो शंका गरी चिन्ता लिनु व्यर्थ छ । एउटा पुस्तक आफौ छापि हेरौा— कति मुश्किल छ ।
नेपाली साहित्य लेखनको अवस्था कस्तो अवस्थामा छ, सन्तोषजनक वा निराशाजनक ?
अघिको उत्तरले पनि यसलाई सघाउला । लेखनलाई आर्जनसित मात्र जोड्ने हो भने त्यसको प्रशंसा गर्ने बेला भएको छैन तर राष्ट्रिय वाङ्मयको उन्नतिलाई हेर्ने हो भने अहिले हर्ष मान्ने दिन आइसकेका छन् । किनभने नेपाली वाङ्मयको सीमाहीन विस्तारले गर्दा नेपाली जाति पुगेका सबै ठाउामा नेपाली भाषामा साहित्य सिर्जना भइरहेको छ । नेपालको पनि शिक्षाको र चेतनाको स्तर निकै प्रशंसनीय भएकाले गर्दा फेरि दूर दराजमा पनि प्रकाशन व्यवस्था सुगम हुन थालेकोले गर्दा यो दशकदेखि लेखन प्रकाशन अभूतपूर्व गतिमा छ । यसको स्तरको कुरा अर्कै हो तर विद्युतीय माध्यम समेतले गर्दा नेपाली साहित्य सिर्जनाको अवस्था अत्यन्तै सन्तोषजनक छ । नेपाली भाषालाई अभिव्यक्तिको माध्यम बनाएर अनेक जातिका, वर्गका अनेक भाषाभाषि, अनेक भूगोलका नरनारी सबै सिर्जनामा लागेका छन् । के यो स्थिति हर्ष लाग्ने छैन र ?
नेपालमा अन्तराष्ट्रिय साहित्यको प्रभाव कस्तो छ ?
आधुनिक नेपाली साहित्य सम्पूर्ण रूपले अन्तराष्ट्रिय जगमा टेकिएको छ भन्दा हुन्छ । आधुनिक नाटक, निबन्ध, कथा, उपन्यास जस्ता विधाका स्वरूप नै पश्चिमी जगत्बाट सर्दै भारतवर्षको बाटो भएर नेपालीमा आएका हुन् । नेपालीको पनि केही लोक र मौलिक तत्त्व छ तर त्यो लोकका र संस्कृतको जगमा अडिएको छ, जस्तै नाटक, काव्य । रिमाल, सम, महाकवि, भवानी भिक्षू, वीपी कोइराला, विजय मल्ल, गोविन्दबहादुर मल्ल हुादै यताका स्रष्टाहरूमा पाश्चात्य जगत्को प्रभाव र प्रेरणाको मात्रा झन्झन् बढ्दै गएको हो । अघि शङ्कर लामिछानेले वीपी कोइराला, तारिणीप्रसाद, लैनसिंह वाङ्देलहरूले एकैचोटि सात्र्र, कामु, काफ्का, हाइडेगर, स्टिफन ज्विगको कुरा गरेका छन् । देस्रो महासमरपछिको साहित्यको संसार भिन्न र सर्वदेशीय स्वरूपको छ । अहिले ता हेर्नुहोस् हाम्रोमा गद्यकविता हाइकु, ताङ्का, रुवाइ, सिजो, मुक्तक थपिएका छन् भने लेखनका प्रयोग शैलीहरू, अनेक वादकहरू पनि अन्यत्रबाटै आएर स्थापित हुन्छन् ।
नेपालमा पत्रकारिता र साहित्य बिचको समवन्धको बिकास कसरी भैरहेको छ ।
यी दुइटै एक अर्कामा आश्रित छन् । अझ साहित्यचाहिा पत्रकारितामाथि आश्रित रहेको छ । कृति आगमनको सूचना, त्यस सम्बन्धि टिप्पणी व्याख्या आदि पनि पत्रकारिता मार्फत नै सार्वजानिक हुने गर्दछन् । त्यसर्थ पत्रकारिताले साहित्य पनि जन्माइरहेको हुन्छ । दुवैको वृद्धि र विकास समानान्तर नै हुन्छ । गोरखापत्रको प्रकाशनदेखि यता हेर्नू अथवा साहित्यिक पत्रकारिताको आरम्भा शारदा, उदय, भारती, माधवीदेखि यता हेर्नू त्यसै अनुपातमा आज त्यस्ता हजारौा पकाशन पुगे त्यसै अनुपातमा साहित्यिक कृति पनि आइरहेका छन् ।
पत्रकार साहित्यकार हुनसक्छ तर साहित्यकार पत्रकार बन्न सक्दैन भनिन्छ नी ?
यो कुरा सत्य लाग्दछ किनभने साहित्य सिर्जनाको निमित्त सिक्नै पर्ने प्रारम्भिक कक्षाहरूको आवश्यकता देखिादैन, भाषा माध्यम भए पुग्छ । साहित्यमा धर्खराएर हिाड्दाहिाड्दै आफौ दह्रो पाइला टेक्न जानिने कुरा हो । फेरि कुनै विश्वविद्यालयले कसरी साहित्य सिर्जना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै पाठयक्रम गर्न सकेको छैन । तर पत्रकारिताको कुरा गर्दा यसका निश्चित पाठहरू छन् । यसका कक्षाहरू छन् । यसका डिग्री र तहहरू छन् । पत्रकारितामा निश्चित अथवा विशेष शब्द र वाक्यको ज्ञान र प्रयोगको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले एउटा डिग्री अथवा तहको ज्ञान प्राप्त गरेपछि पत्रकार बन्न सक्छ तर ऊ साहित्यकार पनि बन्छ भन्ने निश्चित हुादैन किनभने पत्रकारिता एकप्रकारको यान्त्रिक काम हो । साहित्य हार्दिक र भावनात्मक कुरा हो । त्यसो त कोही ठूला पत्रकार अझ ठूला साहित्यकार पनि भएका छन् । किनभने पात्रकारहरूमध्येबाटै साहित्यले आह्वान गरेका व्यक्ति हुन् भने साहित्यकार भइसकेको व्यक्ति पत्रकार बन्न एक किसिम असम्भवै छ ।
नेपाली पाठकको अवस्थालाई कसरी मूल्यााकन गर्नु भएको छ ?
नेपाली पाठकको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ । तर हाम्रो देशमा पठन क्रियालाई औपचारिक रूपले निश्चित ठाउामा वा घरमा बसेर गर्ने कार्य ठानिन्छ । त्यसकारणले गर्दा हाम्रो पठन संस्कृति अत्यन्तै न्यून छ । विकसित समाजमा मानिसहरू यात्रामा, कार्यस्थलमा, विश्रामको समयमा जहिले पनि जहाा पनि एउटा पुस्तक पल्टाइरहेका हुन्छन् अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यमले श्रवण गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको पठनसंस्कृति अत्यन्तै उच्च छ । यसको परिणाम कृति प्रकाशन, लेखन, वितरण सबै कुरा सोही अनुपातमा प्रभावित छ । हाम्रा वसपार्क, रेष्टुाराा, कफि हाउस्, भोजनगृह, विश्रामालय, कतै काहीा, कसैको हातमा एउटा पुस्तक देखिादैन । हामी पठन संस्कृतिमा अत्यन्तै पछि छौा, पूर्वी एशियाका देशहरूले पनि हाम्रो जस्तो अल्छे बानी त्यागी सके ।
पाठक र लेखक बिच कस्तो समवन्ध बिकास भैरहेको छ ?
यो सम्बन्ध अहिले सकारात्मक भइरहेको छ । प्रकाशनको सुगमताले गर्दा साना ठूला शहरमा र गाउामा पनि लेखकहरू जन्मिन थालेका छन् । पाठकका निमित्त अनेक प्रकारका रिडिङ क्लव, भेटघाट केन्द्र र विशेष गरी पुस्तकालयको वृद्धि भइरहेको छ । अझ काठमाडौा उपत्यकामा अनेक प्रकारका विमर्श, विमोचत, प्रत्यक्षवार्ता, अन्तवार्ता, प्रश्नोत्तरी जस्ता कार्यक्रम बढिरहेका छन् । यसले गर्दा पाठकहरूले लेखकलाई प्रत्यक्ष देख्न, भेट्न , बोल्न पाउाछन् । त्यसले दुईबीच सकारात्मक सम्बन्ध बढिरहेको छ ।
यहाालाई बर्षमा कति लेखक आउनुहुन्छ पुस्तकको समीक्षा र भुमिका लेखाउन ? भुमिका लेख्दा पनि पारिश्रमिक लिने चलन शुरु भएको हो ? भको हो भने कति सम्म लिनु हुन्छ ?
त्यसरी वर्षमा कति जना भन्ने तथ्याङ्क ता रहादैन, तथापि सधौ आइरहेको जस्तो लाग्दछ । पारिश्रमिकको कुरा कस्तो हो भने यी सबै प्रेम र अपसि सम्बन्धले, भावनात्मक बन्धन र विश्वासले गरिने कर्म हुन् । अदालतमा तमासुकको हिसाब गरेझौ यति पृष्ठको यति भनेर आपसि सम्बन्ध समाप्त गर्नेतिर लाग्ने छैन । तर लेखनलाई आफ्नो जीवन बनाइसकेपछि नि:सन्देह लेखनसित संबद्ध कर्महरूमा पारिश्रमिक लिनु–दिनु आपसी इज्जतको, सम्मानको र मर्यादाको कुरा पनि हो । अघि मैले भनो— आपसी सद्भावको कर्म भएकाले गर्दा यसमा मोलतोल हुादैन । पुराण भन्दा पूजा लाउादा जोखाना हेर्दा यति भन्ने चलन हादैन प्रेम तर विश्वासको बन्धन हुन्छ ।
अन्त्यमा लेखक तथा पाठकलाई सुझाव वा आग्रह ?
लेखकहरू समक्ष मेरो निवेदन छ— अध्ययनको व्यापकताले नै सिर्जना पठनीय र जीवन्त हुन सक्छ । आधि समय अध्ययनमा आधि सिर्जनामा लगाउनु होस् । साहित्यका पाठकवर्ग पनि प्रकारान्तरले साहित्यकार नै हुनुहुन्छ । त्यसकारणले पठन संस्कृतिको स्थापनामा यहााहरूको योगदान प्रार्थनीय छ । अन्त्यमा लेखक पाठक दुवैले साहित्यलाई सस्ता प्रचार र प्रोपागण्डादेखि बचाएर राख्न सिक्नु र सक्नु पर्दछ ।
(२०७० साल २८ असार शुक्रबार को कारोबार दैनिकले प्रकाशित पत्रिकामा)
Posted by Govinda Raj Bhattarai at 10:49 PM
Bhanendra Sambahamfe 'Jujhaaru' July 21, 2013 at 11:12 PM
प्रणाम आदरणीय गुरु गोविन्दराज भट्टराईज्यू !
शिक्षाप्रद,अनुकरणीय, हार्दिक, बौद्धिक खुराकयुक्त अन्तरवार्ता ।